အရက်မှန်သမျှ သောက်သုံးလျှင် ဘေးဥပဒ် မကင်းဟုဆို - Yangon Media Group
ယခင်က တစ်နေ့လျှင် ဝိုင်တစ်ခွက် သောက်သုံးလျှင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆထားခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်မှုအသစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့သော ချက်အရက်သောက်သုံးမှုက မည်သည့်ပမာဏပင်ဖြစ်စေ ဘေးကင်းမှုမရှိဟု အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ကြသည်။
သုတေသီတို့က အရက်ကို အသင့်အတင့်သောက်သုံးပါက နှလုံးရောဂါကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဝန်ခံခဲ့ကြသော်လည်း အရက်သောက်သုံးခြင်းက ကင်ဆာနှင့် အခြားရောဂါများကိုမူ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဟုဆိုသည်။ The Global Burden of Disease လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွင် အရက်သောက်သုံး သည့်ပမာဏနှင့် ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ လေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုရာတွင် ဗြိတိန်အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၅ နိုင်ငံတို့မှ ၁၉၉ဝ နှင့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ကြား အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံကာ လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ် သည်။ သုတေသီတို့၏ တွေ့ရှိချက်အရ အရက်သောက်သုံးခြင်းမရှိသူ ၁ဝဝဝဝဝ ထဲမှ အရက်သောက်သုံးသူ ၉၁၄ ဦးသည် ကင်ဆာ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဝေဒနာကဲ့သို့သော အရက်နှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ခံစားရနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
မျက်စိစမ်းသပ်မှု နှောင့်နှေးခြင်းက ကလေးများ အမြင်အာရုံပြဿနာဖြစ်ပေါ်
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အပါအဝင် ပြည်သူများ စိတ်ဝင်စားမှု ??
ငြိမ်းချမ်းရေး အခင်းအကျင်း ဖန်တီးနိုင်ရန် စစ်ရေးနည်းကို စွန့်၍ နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းဖြင့်ေ?
ပင်လယ်ကွေ့ဒေသသို့ ဒုတိယစစ်သင်္ဘော တစ်စင်း ဗြိတိန် ထပ်မံစေလွှတ်မည်